घरभित्र मोबाइल नेटवर्क नटिप्दा हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस् – Esewanews
Home / Headline / घरभित्र मोबाइल नेटवर्क नटिप्दा हैरान हुनुहुन्छ ? यसो गर्नुहोस्
Shivaram Khadka Headline, विविध Leaveacomment 7560 Views
फोनमा कुरा गर्दागर्दै सिग्नल गयो भने हामी हैरान हुन्छौं । कसैसँग एकदमै महत्वपूर्ण कुरा गरिरहेको बेला यस्तो समस्या आइलाग्यो भने झन् धेरै परेशान भइन्छ ।
यसैगरी डीबीएम भ्यालु -८० देखि ८९ छ भने राम्रो, -९० देखि -९९ छ भने औषत, -१०० देखि -१०९ छ भने कमजोर र -११० देखि १२० छ भने धेरै कमजोर मानिन्छ । मोबाइल नेटवर्क धेरै कमजोर हुँदा तपाईंको मोबाइलमा टावर नै देखिने छैन, देखिए पनि मुस्किलसँग एउटा मात्र दखिनेछ । source: techpana
१५ फाल्गुन २०७७, शनिबार ०५:३६